လူမှန် နေရာမှန် ? – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Benifits, co-operative, individualism, strength. Bookmark the permalink.
← Mp3Raid music code- Testing
ဆင်ခြေ၊ ဆင်လက် ၊ ဆင်နားရွက် →
10 thoughts on “လူမှန် နေရာမှန် ?”
MrDBA | May 18, 2009 at 10:08 am
ကုမ်ရာသီသူ | May 18, 2009 at 11:33 am
ကိုကြီးဒီဘီ။ မိကောက်ရဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာတယ်ထင်ပါ့။ 😛 ရုံးချိန်မှာ ဘလော့လည်သည်ပေါ့။ ဒါဆို ကိုကြီးဒီဘီ နေရာကောင်းမှာ ရှိတာ သေချာသည်။ (ကျွန်တော်ကတော့ အတိအကျကို လိုက်နာပါသည် 😀 အကျင့်ကောင်းလေးတွေ)
ရွှေအောင် | May 18, 2009 at 1:10 pm
ကုမ်ရာသီသူ | May 19, 2009 at 12:28 am
ဘယ့်နှယ်။ ကိုရွှေအောင် – ဒီလာပြီး မှတ်သားသလေး ဘာလေးနဲ့ တရုတ်ပြည်သွား တောလားကြီးကို တန်းလန်း မထားနဲ့နော် ။ ဒါပဲ။
minneain | May 20, 2009 at 3:46 pm
ThihaThit | May 21, 2009 at 1:05 am
ကိုကြီးဒီဘီလို မိကောက်ရဲ့ လမ်းစဉ်တော့ မကျင့်သုံးရသေးဘူး..
ကုမ်ရာသီသူ | May 23, 2009 at 1:33 am
အဟား။ ကိုသဟသရဲ့ ချန်းချန်ကို စောင့်ရှောက်မယ့်လူတွေ တစ်ပြုံကြီးမှာ တို့တော့ အမှတ်တစ်မှတ်ရပဟေ့။ 😀
ကိုကြီးဒီဘီလိုက်နာမှာ သေချာသလောက်ရှိတဲ့ မိကောက်ရဲ့ လမ်းစဉ်ကို ဘလော့တစ်ခုမှာ တွေ့မိသလိုပဲ။ သေသေချာချာ မမှတ်မိတော့တာ။ နောက်မှ ပြန်ရှာတွေ့ရင် မျှလိုက်ပါ့မယ်နော်။
ကုမ်ရာသီသူ | May 23, 2009 at 1:35 am
နာတိပါတယ် မောင်ရင်`မင်းအိမ်ဖြူ´ရယ်။ ရုပ်တည်နဲ့ လာနှုတ်ဆက်သွားတာကို။ Anyway, ရောက်လာပါက ကြိုဆိုပါ၏။ 🙂
မင်းအိမ်ဖြူ | May 27, 2009 at 6:06 pm
ဟိုတစ်ခေါက်က နာမည်နဲ့ပတ်သပ်ပြီးရေးထားတာ ဖတ်ဘုးလိုက်တယ်ထင်တယ်
ဒါပေမယ့် အခုလာရှာတော့ မတွေဘူး
ရှိပြီးရင် ထပ်ဖြည့်ဖို. အားမွေးထားပါ လို.
ကုမ်ရာသီသူ | May 28, 2009 at 12:34 am
အဲဒီ မိတ်ဆက် post ကို Sticky တင်ထားတာကနေ ဖြုတ်လိုက်တာ တစ်ပတ်ကျော်ကျော်လောက်ပဲ ရှိဦးမှာပါ မောင်ရင်ရယ်။ နည်းနည်း ကြာသွားပြီဆိုတော့ စာရှုသူ ပရိသတ်များ (ဒီလိုပဲ ပွါးရတာပေါ့) မျက်စိနောက်လောက်ပြီ ထင်လို့ပါ။ အခု comment မှာ link ပြန်ထည့်ထားပေးပါပြီ။ အခုတော့ ရေးလက်စစာပိုဒ်လေးတောင် ´အဆုံးသတ်မသွားဘူး´ဖြစ်နေလို့ ကြိုကြိုတင်တင် တောင်းပန်ပါကြောင်း၊ စကောရွက်ပါကြောင်း 🙂